Car Gaz 2310: ezibekiweko lobuchwepheshe, izithombe kanye nokubuyekeza
Umkhaya yokukhanya compact nezimoto bezentengiselwano brand "Sobol" yavela kuyi-1998 futhi wawuhlanganisa eziningi ukushintshwa minibuses - Gaz-2310 ibhodi kanye ezimotweni.
Entsha imodeli jikelele
"Sable" - kuba ehlukile, ukuthuthukiswa esizimele umklamo bureau ka GAS. Uma ungenalo acabangele ukufana yangaphandle ne "iNsephe", kamuva kwaba kuwo wonke imoto ekilasini ehluke ngokuphelele, ngakolunye imininingwane yalolu hlelo. Inkokhelo "Sable" lincane Insephe 500 kg, futhi ithani elilodwa. Kodwa ngesikhathi esifanayo njengoba evenini zokuhamba abagibeli ezindaweni zasemadolobheni "Sable" Kungcono umshini ukonga ngaphezulu, elula futhi ezihlangene.
Ngo "Sobol" nge "iNsephe" ngezinga eliphezulu ubunye interchangeability pheze ephelele cab, injini, bamba gearbox. Lights, kwamafasitela, izibuko kanye nomnyango izibambo futhi nezilandiso. Lokhu kakhulu ngcono kokubili izimoto kusakhandeka.
"Sobol" ihlukile yasekuqaleni amalungu Uhlaka uhlangothi, front ukumiswa (ezimele ezimbili isigwedlo ku ibhola amabombo), ezingemuva ukumiswa leaf iziphethu isimiso nezinye, kancane ezinzima, kodwa nge ukuphepha wekhasi elikhulu. Ngo "Sobol" amabhuleki ethuthukisiwe, amasondo phambi makhulu ububanzi kakhulu kunaleyo "iNsephe", ezingemuva ukubopha sigubhu.
Uma ucacise uhla "Sable", endaweni yokuqala kuyinto 2310 Gaz - iloli flatbed nge cab olulodwa, khona-ke wezimpahla ezimotweni enezinhlangothi ezimbili zezitokisi ezingu izihlalo kanye esitsheni evulekile for ukulayisha zokwakha ngobuningi, amakhumbi "Barguzin" ukhululekile ejwayelekile izihlalo eziyishumi. Futhi uqeda umugqa-van "de india" kwezihlalo eziyisithupha.
amaloli Khanyisa kungukuthi ekhishwe kuphela njengoba abathwali zokwakha. Izimoto senzelwe ukuthuthwa abagibeli emizileni idolobha kanye imigqa suburban ngaphakathi amakhilomitha angamakhulu amabili. Sicabanga imoto kukhiqizwa ngendlela efanayo. amaloli Khanyisa brand "Sable" isivele ajwayelekile futhi ezindaweni zokwakha, kanye emigwaqeni yedolobha, futhi izwe onguthelawayeka.
Isigaba ahlukene - negesi-2310 (namaveni). Lezi imishini nezinye amakhono, zingabantu zonke imishini jikelele ngakhoke abathwali emzimbeni bagxila ezidingekayo iqhaza wokwakha. Futhi, uma ukwakhiwa zezinkinga alikho, umshini esetshenziswa njengendlela yezokuthutha ukuthuthwa ukolweni omncane kwezimpahla. Kulokhu izimpahla side by side nge ithimba Movers, okuyinto isendaweni ezimbili kwezihlalo ukhululekile.
Isisindo kanye Ubukhulu:
Imoto obuphelele - 4840 mm;
ububanzi - 2075 mm;
ukuphakama - 2200 mm;
wheelbase - 2760 mm;
unyathele - 1700 mm;
phansi imvume, imvume - 150 mm.
van Kathathu ethwele nomthamo 770 kg has izinhlangothi ezilandelayo: 2460/1830/1530. Iyalayisha futhi athula zenqola yenziwa ngokusebenzisa ohlangothini ngokuhambisa umnyango futhi bakhulise-esinanyathiselwe. Ilayisha ukuphakama ingeqi 700 mm. Ukuphakama kwelinye lamagumbi umthwalo elingamamitha nje phezu nengxenye.
Engemuva "Sable", kanye nengxenye ephakathi ye gumbi, njenge-evenini kuka iloli. Futhi nakuba kuyinto esingaphansi ubude "iNsephe" ukuba 660 mm, ongakhetha cab akukashintshi, ongaboni isikhala elingaphakathi wahlala ivulekile efanayo.
Salon ngamunye "Sable", eyakhululwa ngo-baleli format, ifakwe eziyize oluncane. Ngakho, abagibeli behlukene hold wezimpahla, okusho ukuthi akudingeki ukuba uphefumule usimende uthuli noma okunye ukwakhiwa imibango elimazayo.
Ngesikhathi imoto umndeni "Sobol" efakwe izinjini ngezinhlobo eziningi. Lokhu four cylinder, okusemgqeni, uphethiloli injini nge displacement 2.3 amalitha (brand ZMZ-4066.10) futhi 150 hp phakathi ukujikeleza 5200 r / imiz. Ngesicelo yomthengi umshini ifakwe ezimbili-litre turbodiesel (Gaz-560), 100 hp at 4500 r / imiz nge uphethiloli supply sekhompiyutha-elawulwa. Motor evumela ukuthuthukisa ijubane kuze kufinyelele 140 km / h. Fuel ukusetshenziswa ivela amalitha per km 100 9.5 kuya ku-11.
Ekuqaleni, ngaphansi hood, "Sobol 'washikashikeka izinjini Zavolzhsky injini isitshalo. Ngemva ngcono izimoto babe ephelele motors Cummins. Lokhu kwaba nengxabano ezengeziwe esivuna ukuthenga iloli. Khona-ke imoto waqala ishiwo wonke-wheel drive okufana. Ngesikhathi esifanayo kwakukhona izimfanelo ezifana nezimo, amandla ukusetshenziswa kwe-chassis, amanani aphansi futhi eziningi iziphakamiso ezahlukene olufana amabhonasi.
Abathengi assorted amaloli compact futhi ngoba isiteji iloli iye bengahlonishwa, futhi lokhu kuyasiza kakhulu uma imoto siqhutshwa ezindaweni zokwakha. Ukulanda kuphela Forklift uhlobo, akukho Cranes kanye ugibelisa.
Ngokushesha kwaba sobala ukuthi abathengi ukuthi babe in ngezandla ephumelela kakhulu, ethembekile, elula futhi engabizi ukusebenza iloli, okuyinto ukulungele ukusebenza imini nobusuku. Sales anda. Izingxenye umbuzo wayengekho, njengoba babenjalo iyiphi okunezinhlobonhlobo futhi zibiza ayibizi kakhulu. izimoto kusakhandeka yayiphezulu, imisebenzi eminingi umshayeli ungenza mathupha.
Izinjini ifakwe ezinhlanu-ngesivinini transmission ibhukwana. Futhi lena enye plus, okhuluma esivuna iloli.
ukumiswa Front - wishbone double ezimele, nge gas iziphethu nezintwa isimame transverse post-zokulinganiswa.
Ukumiswa ezingemuva - engaphansi, ku longitudinal semi elliptic leaf iziphethu nge wokubacindezela ukushaqeka wezinciphisi futhi uvumelanise-stabilizer ibha.
System - wokubacindezela ezimbili-wesifunda ifakwe inzwa cleaner booster kanye ezibucayi ketshezi ezingeni iconsi. amabhuleki front - disc umoya, bakhulise - sigubhu. Ukuze uthole sikukhokhise inhlawulo, imoto ifakwe ABS.
Kuze kube 2006, zonke izimoto Gaz 2310 emndenini "Sobol" akhiqizwa amaqoqwana ezincane zize ayixhunyiwe ukukhiqizwa elihambayo umhlangano line ukuthi "iNsephe." inhlangano Double usebenzisa izingxenye zifane okwanda ukukhululwa kwe "Sobol". abathengi Russian yaqala ukuthola izimoto 2310 Gaz eliningi eyanele.
Nokho, isidingo amaloli ukukhanya laqhubeka landa, njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi zisusiwe imikhawulo ukungena ezindaweni ezimaphakathi eMoscow salokhu ikilasi semoto. Isisindo umshini 2310 igesi okwakukhona 900 kg, niyafanelana ngokugcwele isisindo kuvunyelwe. Futhi lokhu kuyabathokozisa abanikazi.
Ngo-2010, zonke izimoto Gaz 2310 lidlule restyling futhi wathola igama "Sobol-ibhizinisi." Ngo sama entsha amaloli compact ibukeke ingcono kakhulu, yonke imikhawulo yasuswa, futhi "Sobol" waqala ukukhonza phakathi edolobheni laseMoscow.
Njengamanje, "Sobol" isikhathi, intengo okuyinto njalo igcinwe silinganisela ngendlela enengqondo, kuyafaneleka ruble ecishe ibe yizinkulungwane 750. Lokhu kukuvumela ukuba athenge ngaphandle komzamo omkhulu. Kungakhathaliseki ukuhlela kabusha basuke ithengiswe, "Sable", intengo uzokwamukeleka kunoma isiphi isimo.
Samsung uye wasungula 'okusobala' ukuphepha iloli
Ugandaganda "Photon": Ukucaciswa, amamodeli
Ihhotela "Bogatyr 4 *" (Sochi, Adler): izibuyekezo, izithombe, oxhumana nabo
Iphumelela kangakanani i-decoction ye-parsley yokulahlekelwa isisindo?
Njengomuntu kuyinto: isakhiwo bangaphandle zangaphakathi namalungu omzimba womuntu
Ukuganukeja "Surprise" - ngomunye wabokuqala